Ny fampiharana an'ny antoko fahatelo dia voaozona ao amin'ny Apple Watch | Avy amin'ny mac aho
Ny Apple Watch dia tsy isalasalana fa famantaranandro fanitarana ary misy pitsopitsony manaporofo izany. Tamin'ny voalohany, rehefa natomboka ilay famantaranandro, dia nanao izay farany azony natao ny mpampiasa rehetra mba ho eo amin'ny fitaovana Apple amin'ny alàlan'ny "fitaratra" avy amin'ny iPhone.
Tokony holazaiko fa misy ny rindranasa avy amin'ny antoko fahatelo izay miasa tsara amin'ny famantaranandro, saingy misy maro hafa izay tsy ary "mihoatra ny" fanahafana ireo fampiharana "ananantsika amin'ny iPhone amin'ny fiambenana, ireto hiafara amin'ny fanjavonan'ny fitaovana hato-tanana izy ireo amin'ny fotoana fohy ary mamela fomba manokana mankany amin'ireo rindran-damina zanatany ho an'ny famantaranandro mihitsy.
Izany rehetra izany dia hanatsara ny traikefa amin'ny Apple Watch
Amin'ny ankapobeny, ny fanapahan-kevitra farany hamafana ireo fampiharana tsy tompon-tany ireo amin'ny famantaranandro ho toy ny tranga farany farany ananan'izy ireo voafafa Instagram an'ny Apple Watch, tokony ho tsara ho an'ny mpampiasa izy ireo satria hanome izany traikefa tena mandaitra sy mailaka haingana izany rehefa lasa zanatany ny fampiharana. SAINGY misy ny tranga izay manatsarana tsara ireo fampiharana an'ny antoko fahatelo toy ny Twetboot na Telegram, izay raha ny fitsipika dia tsy ho voakasik'ity fepetra ity.
Ny kinova beta farany navoakan'i Apple ho an'ny Apple Watch, 4.3.1 mampiseho fampitandremana toy ilay ananantsika eo ambonin'ireto andalana ireto isaky ny ampiasaina ny fampiharana tsy tompon-tany amin'ilay famantaranandro, izay famantarana tsy azo iadian-kevitra izay hanehoan'i Apple ny làlana izay hizoran'ny rafi-pandrefesana smartwatch amin'ny ho avy tsy ho ela, ary mamela ireo fampiharana avy amin'ny antoko fahatelo amin'ny kinova WatchOS ho avy izay tsy noforonina manokana ho an'ny fitaovana. Ity fepetra ity dia mety ho tsara na ratsy, fa ny mazava dia ny Apple Watch dia mila mihatsara amin'io lafiny io ary raha tsy nanao an'izany izy dia azo atao tsara ny manafoana mivantana ireo karazana rindranasa ireo ary avelao ho an'ny famantaranandro ireo noforonina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Ny fampiharana an'ny antoko fahatelo dia voaozona ao amin'ny Apple Watch
voamarika dia hoy izy:
Fa hey, lahatsoratra tsy misy dikany inona izany. Ny editor dia mbola tsy nahare na inona na inona efa novakiana tao. Ny hampiatoan'izy ireo ny famelana azy ireo dia ny fampiharana Apple Watch izay mandeha amin'ny iPhone, toy ireo voalohany. Ankehitriny dia tsy maintsy ho tompon-tany izy ireo, mihazakazaka amin'ny famataran'ora mihitsy fa tsy ho fampifangaroana fotsiny an'ny rindranasa izay natomboka tamin'ny finday. Saingy mbola hisy (mazava ho azy!) Fangatahana antoko fahatelo. Ny fomba fandaharana sy fampandehanana azy ireo ihany no tsy maintsy ilaina amin'ny famantaranandro. Miseho ny hafatra rehefa misy programa voapetraka amin'ny maody taloha (mihazakazaka amin'ny iphone) ary mampitandrina fa raha tsy manavao azy io ny mpamorona ary mampandeha azy io am-pitoerana amin'ny famantaranandro dia hijanona tsy hiasa izany.
Mac dad dia hoy izy:
Tsia, tsy mahita na inona na inona izy. Inona ny Instagram? Mbola manana izany amin'ny famantaranandroko paoma aho ary mandray fampandrenesana toy ny mahazatra hatrany
Mamaly an'i Mac dad
LaCie Rugged RAID Pro, kapila mangidy hiasa miaraka amin'ny MacBook any an-tsaha